मोबाइल ‘ह्याङ’ भयो ? त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस् - Sagarmatha TV
मोबाइल ‘ह्याङ’ भयो ? त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं – अहिले ओएस अर्थात एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएका स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । तर, यस्ता फोनमा भाइरसको आक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ । यस्ता फोनमा भाइरसले कुनै न कुनै तरिकाले आक्रमण गर्न सक्छ । यी भाइरसले स्मार्टफोनको डाटामा हानी पुर्याउन सक्छ । त्यसैले, यस्ता भाइरसलाई हटाउनै पर्छ । तर, कसरी ?